बिकिनी तस्बिर ट्रोल भएपछि फ्यानलाई कंगनाको यस्तो कडा जवाफ « Salleri Khabar
बिकिनी तस्बिर ट्रोल भएपछि फ्यानलाई कंगनाको यस्तो कडा जवाफ
एजेन्सी । बलिउड नायिका कंगना रनौटले आफूलाई बिकिनी फोटोका लागि ट्रोल गर्नेहरु र उनलाई संस्कारको पाठ सिकाउनेहरुलाई तिखो जवाफ फर्काएकी छिन् ।
प्राय बलिउडमा धेरै नै विवादमा आउने अभिनेत्रीमा कंगना । यती बेला उनको केही भाइरल तस्बिरले बलिउड मिडियामा राम्रो स्थान दीरहेको छ ।
बिकिनी लगाएको तस्बिर कंगनाको यती बेला चर्चामा छ l उनी समुद्री तटमा बसेकी छिन् । सोही तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै क्याप्सनमा ,‘शुभ प्रभात साथीहरू । मैले भ्रमण गरेको सब भन्दा रमाइलो ठाउँहरू मध्ये एक हो मेक्सिको ।
सुन्दर, तर अप्रत्याशित ठाउँ । यहाँ मेक्सिकोको सानो टापु टुलमको फोटो छ भनेर लेखेकी छिन ।’ उक्त तस्बिरका कारण कंगना ट्रोलको सिकार भएकी हुन् ।
उनले भनेकी छन् कुनै बेला माता भैरवीले कपाल खोलेर, वस्त्रहीन भएर रगत पिउने अवतार लिएर आएको खण्डमा तिमीहरुले के होला ? तिमीहरुको केही लाग्दैन र आफूलाई भक्त भनिरहेका छौ ? धर्ममा हिँड, यसको ठेकेदार नबन ।’